जन्मदाको साइतअनुरूप भविष्य निर्धारण हुन्छ - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
तस्विर: नरेन्द्र रौले
२०५२ सालदेखि ज्योतिष विधामा सक्रिय छन्— डा. सुनिल सिटौला । २०५८ सालमा ग्लोबल एस्ट्रोलोजी रिसर्च सेन्टरको अध्यक्ष भएका डा. सिटौलाले विश्व ज्योतिष विद्यापीठबाट ज्योतिषविद्यामा मास्टर्स गरेका छन् । अल्टरनेटिभ मेडिसिनका ब्याचलर्स सिटौलालाई इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ ओरियन्टल हेरिटेजले डाक्टरको उपाधि दिएको छ ।
राशि र नक्षत्रसम्बन्धी जानकारी दिने जोखना एपसमेत बनाएका डा. सिटौलाले ०६२ सालदेखि रेडियो तथा टेलिभिजनमा ज्योतिष विधाका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । डा. सिटौलाका ज्योतिष विज्ञान र हस्तरेखासम्बन्धी ५ वटा पुस्तक प्रकाशित छन् । ज्योतिष विज्ञानसम्बन्धी पत्रिकाको विगत १२ वर्षदेखि सम्पादनसमेत गरिरहेका सिटौलासँग विवाह र यसको ज्योतिष विज्ञानसँगको सम्बन्धका विषयमा साप्ताहिकले गरेको कुराकानी :
विवाह र ज्योतिष विज्ञानबीच के कस्तो सम्बन्ध छ ?
ज्योतिष विज्ञानलाई संस्कृतमा सूर्यलगायतका ग्रहहरूको जानकारी राख्ने शास्त्र भनिएको छ । अमेरिका, युरोप तथा रूसका आ–आफ्नै अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् । त्यसभन्दा धेरै वर्षअघि भारत वर्षमा ज्योतिषीहरूले ग्रहको गणित गर्थे, ग्रहणको गणित गर्थे । यसको पहिलो नियम भनेको सूर्यलगायतका ग्रहहरूको अध्ययन गर्नु हो । ग्रहहरूका बारेमा व्याख्या गर्ने ज्योतिषलाई हामी फलित ज्योतिष भन्छौं । फलादेशहरू यही फलित ज्योतिषका आधारमा गरिन्छ । कुनै मानिसको जन्मपछि उसको विवाह कस्तो हुन्छ, उसको सन्तान कस्तो हुन्छ, विद्या कस्तो हुन्छ, मातापितासँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ यावत् कुरा ज्योतिष विज्ञानमार्फत विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यसमा एउटा विवाहको कुरा हो, विवाह शुभ हुन्छ कि हुँदैन वा एकभन्दा बढी विवाह हुन्छ कि भन्ने कुरा त्यो जन्मको साइतबाटै थाहा हुन्छ ।
मुहूर्त भनेको के हो ?
ज्योतिष विज्ञानमा एउटा अवधारणलाई मुहूर्त ज्योतिष भनिन्छ । विवाह मुहूर्तको कुरा यही ज्योतिषअन्तर्गत पर्छ । शुभमुहूर्तमा विवाह गर्‍यो भने शुभ फल मिल्छ भनिन्छ । मुहूर्तको नियममा हाम्रो शास्त्रमा कुन महिना विवाह गर्दा के फल आउँछ, कुन तिथिमा विवाह गर्दा के फल प्राप्त हुन्छ, कुन नक्षत्रका दिन विवाह गर्दा कस्तो फल मिल्छ भन्ने फलादेश छ । यसैका आधारमा सबै कुरा मिलाएर हाम्रो सरकारी पात्रो निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यहाँ यो–यो महिनामा यो–यो दिन विवाह जुर्छ भनेर उल्लेख गरिन्छ ।
पात्रोमा विवाह तिथि कसरी तय गरिन्छ ?
पञ्चांग गणितको प्रक्रियाबाट तिथि तय गरिन्छ । जस्तो आज सप्तमी तिथी हो, भोलि अष्टमी हुन्छ । ग्रहका बारेमा जुन हिसाब गरिन्छ, त्यसलाई हामी सिद्धान्त ज्योतिष भन्छौं र आधुनिक एस्ट्रो फिजिक्स भनेको त्यही हो । गणितका आधारबाट आएको परिणामको व्याख्या गर्ने फलित ज्योतिष हो । यो पूर्वीय दर्शनसँग पनि जोडिन्छ । पूर्वीय दर्शनले प्रारब्ध, प्रेरणा र पुरुषार्थको कुरा गर्छ ।
प्रारब्ध, प्रेरणा र पुरुषार्थ के हो ?
प्रारब्धले अहिले जुन रूप, रंग र स्वभाव छ, त्यो पूर्वजन्मबाट निर्धारित हुन्छ भन्छ । पूर्वीय दर्शनले मानिस जन्मनुका पछाडि पूर्वजन्मका केही संस्कार जुन बाँकी हुन्छन्, जसलाई भोग्नुपर्नेछ, त्यसका लागि जन्म लिएको भन्छ । त्यो भोग्ने संस्कारलाई ग्रहबाट गणित गरेर विश्लेषण गरिन्छ । त्यो प्रारब्धको कुरा हो । जस्तो— जन्मदा कोही धनी कुलमा, कोही गरिब कुलमा जन्मन्छ, कोही स्वस्थ भएर, कोही रोगी भएर जन्मन्छ । त्यो सबै उसको पूर्वजन्मको प्रारब्ध हो । जन्मको साइतअनुसार कोही पत्नीबाट शुभ भएका हुन्छन्, कतिपय अशुभ भएका हुन्छन् । यो कुरा जन्मदाको साइतअनुसार आउँछ । जन्मदाको साइतबाटै वैवाहिक जीवन यस्तो हुन्छ भनेर विष्लेषण गर्न सकिन्छ । वैवाहिक जीवन नराम्रो हुने गणित आयो भने त्यसमा प्रेरणा र पुरुषार्थ जोडिन्छ । त्यसलाई प्रेरणा र पुरुषार्थबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ । पुरुषार्थ बदल्ने भन्दैमा पुसमा धान रोपेर त हुँदैन । पुरुषार्थका लागि पनि निश्चित समय खाका चाहिन्छ, त्यो समय खाका ज्योतिष विज्ञानले कोर्छ ।
विवाहका लागि कुन महिना बढी उपयुक्त मानिन्छ ?
सबैभन्दा उपयुक्त माघ र फागुन हो । त्यसबाहेक असार, जेठ, वैशाख पनि उपयुक्त हुन्छन् । मंसिर विवाहका लागि खासै राम्रो होइन । राशिअनुसार कुन महिनामा विवाह जुर्छ, कुन महिनामा जुर्दैन भन्ने पनि हुन्छ ।
कुन राशिका मानिसका लागि कुन महिना उपयुक्त हुन्छ ?
धेरै मानिसले गलत राशि हेर्छन्, राशि प्रमाणित हुनुपर्छ । मेष राशिका लागि साउन, मंसिर र चैत महिना विवाह, व्रतबन्ध केही पनि जुर्दैन । वृष राशि भएकाले भदौ, पुस र वैशाख महिनामा विवाह गर्न मिल्दैन । मिथुन राशि भएकाले असोज, माघ र जेठ महिना, कर्कट राशिले कात्तिक, फागुन र असारमा विवाह गर्न मिल्दैन । सिंह राशिलाई मंसिर, चैत र साउन तथा कन्या राशिलाई पुस, चैत र भदौ, तुलालाई माघ, जेठ र असोज, वृश्चिक राशिलाई फागुन, असार र कात्तिक महिनामा विवाह जुर्दैन् । धनुका लागि चैत, साउन र मंसिर, मकरका लागि वैशाख, भदौ र पुस, कुम्भका लागि जेठ, असोज र माघ तथा मीन राशिका लागि असार, कात्तिक र फागुन महिना उपयुक्त हुँदैनन् । त्यतिमात्र होइन, विवाहका लागि बृहस्पति ग्रह पनि जुराउनुपर्ने हुन्छ । बृहस्पति ग्रह १३ महिनामा एउटा राशिमा घुम्छ । बृहस्पति ग्रह जन्मदाको राशिबाट ४, ८, १२ मा पार्नु हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा विवाह गरियो भने त्यो विवाह दैविक र आध्यात्मिक हुँदैन भनिन्छ ।
हाम्रो ज्योषितशास्त्र अनुसार यो समयमा जन्मिएको व्यक्तिको विवाह यो दिशातिर यस्तो राशि यस्तो रूप, रंग, स्वभाव भएकोसँग विवाह हुन सक्छ भन्न सकिन्छ । यो ज्योतिषको गहिरो अध्ययनबाट आउँछ । सामान्य रूपमा आफ्नो राशिबाट गन्दै जाँदा ६, ८ र १२ को राशि पर्‍यो भने विवाह टिक्दैन । जस्तो— मेषबाट गन्दै जाँदा कन्या ६, वृश्चिक ८ र मीन १२ हुन्छ । यसमा एउटा अर्को नियम पनि छ, केटीको राशि अगाडि आयो र केटाको पछि आयो भने विध्वंस हुन्छ, केटाको राशि अगाडि आएर केटीको पछि आयो भने अलिअलि मिल्छ । अर्को नियम राशि परस्पर फरक ६, ८ पर्‍यो तर राशिको स्वामी मित्र भयो भने मिल्छ । देवगण, मनुष्य तथा राक्षस गणको पनि नियम छ, जुन जन्मको नक्षत्रबाट निर्धारित हुन्छ । एउटै गणमा प्रीति हुन्छ । नाडी भन्ने अर्को हुन्छ एउटै नाडीमा विवाह भयो भने सन्तानमा बाधा हुन्छ भनिन्छ । धर्मशास्त्रमा एउटै गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन, सन्तानमा वंशाणुगत खराबी देखिन्छ भनिन्छ, नाडीको नियम ठ्याक्कै त्यही हो ।
राशि भनेको चन्द्रमा हो । जस्तो मेष राशि भनेको जन्मदा चन्द्रमा मेष राशिमा थियो भन्ने हो । चन्द्रमालाई जलीय ग्रह भनिन्छ । औंसी र पूर्णिमाका बेला समुद्रमा ज्वारभाटा आउँछ, हत्या र आत्महत्या आंैशी र पूर्णिमाको आसपासमा हुन्छ भनिन्छ । हाम्रो शरीरमा ७५ प्रतिशत पानी हुन्छ । मायाप्रीतिमा पनि हामी चन्द्रमा नै हेर्छौ । चन्द्रमाबाट राशि मिलाइन्छ ।
त्यसका लागि हाम्रो भाषामा सामुद्रिक शास्त्र भन्ने छ, जसबाट शरीरको लक्षण हेरिन्छ । शरीरको लक्षण हेर्दा दाँत उछिट्टिनु, फाट्नु गृहस्थ जीवनका लागि नकारात्मक मानिन्छ । दाँत टम्म मिलेको हुनुपर्छ । हाँस्दा डिम्पल पर्नु हुँदैन, डिम्पल पर्ने व्यक्तिहरू व्यभिचारी हुन्छन् भनिन्छ । हत्केलाका औंला टम्म मिलेको हुनुपर्छ, हात छाम्दा कोमल हुनुपर्छ, यस्ता युवतीहरू सुन्दर हुन्छन्, सुकुमार हुन्छन् । जन्मदाको समयमा लग्न कुण्डलीमा जसको बृहस्पति वा शुक्र केन्द्रमा बस्यो त्यस्ता केटीहरू लच्छिनका हुन्छन् ।
ज्योतिषशास्त्रले पुरुष र स्त्रीलाई परस्पर फरक–फरक दिशाबाट जोड्छ । उनीहरूलाई एकआपसमा बाँध्ने काम यौनले मात्र गर्छ । ज्योतिषशास्त्रमा उदय लग्न आफ्नो हुन्छ भने अस्त लग्न विपरीत हुन्छ । यौनले मात्र स्त्री–पुरुषलाई एक सूत्रमा बाँध्ने भएकाले ज्योतिषशास्त्रमा यौन जीवनका लागि योनि भन्ने छ । पुरुषको योनि के हो, स्त्रीको योनि के हो त्यसबाट थाहा हुन्छ । त्यो योनि परस्पर शत्रु राशिमा पर्‍यो भने उनीहरूको सम्बन्ध चाँडै टुट्न सक्छ । ज्योतिषशास्त्रमा हामी मुहूर्त मिलाउँछौं तर लभ म्यारिज गर्नेहरू भावनाबाट प्रेरित हुन्छन् । ज्योतिषशास्त्रले मिलाउने भनेको उनीहरूको आत्मीक एवं दैविक डिभाइन हो ।
ज्योतिषशास्त्रअनुसार विवाह गर्न कि जन्मकुण्डलीको द्वितीय स्थान कि सप्तम स्थानको बसेको ग्रहको समय अवधि चल्नुपर्छ । कि त तपाईंको जन्मको चन्द्रमाबाट बृहस्पति ४, ८, १२ बाहेक अरू ठाउँमा बसेको हुनुपर्छ । त्यसैगरी पहिले विवाहको समय निकाल्नुपर्छ । मंगल, राहु र शनि ग्रह चलेका बेला विवाह गर्नु हुँदैन, सम्बन्ध बिग्रन सक्छ । शुक्र, बृहस्पति, बुध तथा चन्द्रमा चलेका बेला विवाह गर्नु उपयुक्त मानिन्छ ।
ज्योतिशास्त्रअनुसार सूर्य ग्रह पूर्व दिशाको स्वामी हुन्छ, चन्द्रमा ग्रह वायव्य दिशा (पश्चिम र उत्तरको कुना) को स्वामी हुन्छ । बृहस्पति उत्तर र पूर्वको कुना, मंगल ग्रह दक्षिण दिशा, शुक्र ग्रह दक्षिण र पूर्वको कुना, शनि ग्रह भनेको पश्चिम दिशा, बुध उत्तर दिशा यसरी ग्रहअनुसार पनि दिशा हुन्छ । पत्नी स्थानमा कुन ग्रह बस्यो वा पत्नी स्थानको स्वामी कुन ग्रह हो, त्यो ग्रहको दिशामा विवाह गरे एकदमै राम्रो हुन्छ, ठ्याक्कै जुर्छ ।
जन्मकुण्डलीअनुसार योग्य ज्योतिषीले विवाह कसरी हुन्छ साथीको सहयोग वा आफ्नै अग्रसरतामा आदि कुरा पत्ता लगाउन सक्छन् । जन्मकुण्डलीअनुसार विवाह ग्रह लग्न छ भने आफ्नै प्रयासमा विवाह हुन्छ । सामान्यतया: चर, स्थिर र द्विस्वभावले पनि विवाहलाई प्रभावित गर्छ । चर राशि भयो भने २ सय किलोमिटरभन्दा टाढा विवाह हुन्छ, स्थिर भयो भने ९० किलोमिटरभित्र हुन्छ । द्विस्वभाव राशि भयो भने ९० देखि २ सय किलोमिटरभित्र हुन्छ । मेष, कर्कट, तुला, मकर चर राशिभित्र पर्छन् । वृष, सिंह तथा कुम्भ स्थिर राशि हुन् भने मिथुन, कन्या र मीन द्विस्वभाव राशिमा पर्छन् ।
ज्योतिषमा यसको पनि नियम छ । त्यसमा राजामहाराजाका लागि १ सय ८ वटा विवाहभन्दा माथि कल्पना गरिएको छ भने सामान्य जनताका लागि २४ वटासम्म विवाहको कल्पना गरिएको छ, तर सामान्य नियममा पति स्थानमा वा पत्नीस्थानमा जति वटा ग्रह भयो, त्यति जनासँग सम्बन्ध हुन्छ ।